Funky Old Maydena - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAidan
Indawo epholileyo kunye nenqabileyo yokuphumla ngaphambi okanye emva kohambo lwakho, ebekwe ngokufanelekileyo ezantsi kwesitrato ukusuka kwipaki yebhayisekile kwaye kufutshane neVenkile yeVenkile. Yonwabela itshokolethi eshushu ujonge eMt Field West kunye neTyenna Peak okanye uphakamise iinyawo zakho kwaye uphumle esofeni. Nge-'atrium' efihlakeleyo, umlilo wegesi, i-intanethi ye-nbn, i-bose wifi / i-bluetooth speaker, indawo yokugcina ibhayisekile kunye nokuhlamba umgangatho, asinakulinda ukuba uze kwaye ujabulele i-Funky Old Maydena!
Ipropathi ikhuselekile kwizinja kwaye siyayamkela i-pooches yakho!
Amalungiselelo okulala aquka ibhedi yokumkanikazi kwigumbi lokulala eliphambili kunye nebhedi enye / kabini kwigumbi lokulala lesibini.
Kukho udonga lweTV oluxhonywe kwigumbi lokuhlala ngaphezulu kwendawo yomlilo evulekileyo, enentambo ye-HDMI yokuplaga kwilaptop yakho kwiimuvi zangokuhlwa okanye ukusasaza imijikelo yendebe yehlabathi yesibhayisekile sentaba.
Ikhitshi ixhotyiswe zonke izinto ezisisiseko eziyimfuneko ukupheka isaqhwithi kwintsapho okanye iqela labahlobo, kwaye i-barbeque ibekwe kwindawo efihlakeleyo ngaphandle.
Kwelinye icala lendawo efihlakeleyo kukho i-bungalow enendawo yokuhlamba impahla kunye nendawo yokugcina kufutshane nendlu. Ishedi enkulu iqulethe iworkshop yebhayisekile kunye nokugcinwa. Kwindawo efihlakeleyo uya kufumana itafile kunye nezitulo, i-BBQ, ukukhupha umgca weempahla, isofa, izitya zezinja, kunye nebhedi enkulu yenja ephakanyisiweyo (enkulu ngokwaneleyo kuGeorge, i-Great Dane yethu).
Hamba ujikeleze ngasemva kwe-bungalow ukuze ufumane injongo yokuhlamba ibhayisekile phantsi kwedesika yokukhwela uhambo lwakho emva kokudelela imini yonke endulini.
4.80 · Izimvo eziyi-271
Siza kunika iindwendwe ubumfihlo ngexesha lokuhlala kwazo, kodwa sonwabe ngakumbi ukubonelela ngeengcebiso ngemisebenzi yasekhaya apho sinakho nokuba kukukhwela, ukuhamba ngeenyawo, okanye ukubona.
Inombolo yomthetho: 60/2018